Zidane oo aan ka argagaxsaneyn dhibaatada Kooxdiisa kadib markii Laga soo tuuray Copa del Rey- Yuuse ku Eedeeyay Guuldarradii Xalay? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » La Liga Spain » Zidane oo aan ka argagaxsaneyn dhibaatada Kooxdiisa kadib markii Laga soo tuuray Copa del Rey- Yuuse ku Eedeeyay Guuldarradii Xalay?
Zidane oo aan ka argagaxsaneyn dhibaatada Kooxdiisa kadib markii Laga soo tuuray Copa del Rey- Yuuse ku Eedeeyay Guuldarradii Xalay?	Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa weli rajo ka qaba in kooxdiisa ay soo kabsan doonto kadib markii xalay laga soo tuuray tartanka Copa del Rey.
Waxay 2-2 la galeen kooxda Celta Vigo xalay taasoo la micno aheyd in Madrid ay 4-3 guul darro ah la kulanto wadar ahaan labada lug kulankii quarter-finalka.
Kooxda Zidane ayaa baxsad xun kujirta hadda, iyadoo keliya hal guul ay gaareen shantii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan.
Laakiin iyadoo kooxdiisa ay fadhido booska ugu sareeya La Liga islamarkaana Champions League ay gareen wareega16ka, Zidane ayaa diidan in argagax weyn uu kujiro kooxdiisa.
“Waxaan helnay fursado oo aan ka faa’iideysan, laakiin waxaan doonayaa in aan wax ka bedelno qaab ciyaareedkeena,” ayuu yiri halyeyga France.
Madrid, ayaa martigelin doonta Real Sociedad axada, xili ay hal dhibic ku hayaan hogaanka horyaalka, laakiin waxay heystaan kulan dheeraad ah oo ay ku wajahayaan kooxda Valencia.
Zidane ayaa sheegay in jirin baahi loo qabo in kooxdiisa la dhaleeceeyo kadib markii ay ka hartay koobkii ugu horeeyay, inkastoo qaab niyad jab ah ay dareemayaan taageerayaasha.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/zidane-oo-aan-ka-argagaxsaneyn-dhibaatada-kooxdiisa-kadib-markii-laga-soo-tuuray-copa-del-rey-yuuse-ku-eedeeyay-guuldarradii-xalay/">Zidane oo aan ka argagaxsaneyn dhibaatada Kooxdiisa kadib markii Laga soo tuuray Copa del Rey- Yuuse ku Eedeeyay Guuldarradii Xalay?</a>